Mediam-bahoaka · Mey, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Mey, 2011
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Mey, 2011
Oganda : Sarin'ny diabe “Walk to Work”
Afrika Mainty21 Mey 2011
Nanao fihetsiketsehana hanoherana ny fiakaran'ny vidin-dasantsy, ny vidin-tsakafo ary ny fisondrotam-bidim-piainana midangana ny Ogandey tao anatin'ny roa volana izay. Androany, nampiasa ny loko raozy, ny baomba mandatsa-dranomaso ary bala tena izy nitifirana ny mpanao fihetsiketsehana mihitsy ny polisy. Indro atolotra an-tsary anio ny tantaran'ny fihetsiketsehana. Indro ny antony mahatonga ny...
Azia Atsinanana21 Mey 2011
Kazakhstan: Terantany avy any Kazakhstan nivoaka tamin'ny vaovao maneran-tany – nosamborina ny anankiray, ny iray hafa nisy namono
Azia Afovoany sy Kaokazy19 Mey 2011
Terantany avy any Kazakhstan anankiroa no nivoaka tamin'ny vaovao iraisam-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo, nampalahelo avokoa ny nanjo azy roalahy. Ny voalohany, Valeriy Tolmachev, mpanolon-tsaina ao amin'ny UNESCO any Kazakhstan, nanafika mpanamory fiaramanidina iray tamin'ny antsy nandritra ny dia Paris-Rome ary nandidy ity farany hamily ny dia ho any Lybie. Voafehin'ny...
Danemarka: Lalàna mampiady hevitra amerenana ny fisavana an-tsisintany
Eoropa Andrefana18 Mey 2011
Nanambara vao tsy ela ny famerenana indray ny fisavana an-tsisintany miaraka amin'i Alemaina sy Soeda ny antoko ankavanana nasionalista Danoà, ny antokon'ny vahoaka Danoà (Dansk Folkeparti/DF). Tsy nahovoka ny antoko eo amin'ny fitondrana afovoany-ankavanana vitsy an'isa ka dia lany ilay tolo-kevitra. Nanampoka ny maro izany fanapahan-kevitry ny Danoà izany satria...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Mey 2011
Azia Atsimo16 Mey 2011
Espana: Namely An'i Murcia Ny Horohorontany
Eoropa Andrefana13 Mey 2011
Tratry ny horohorontany in-droa i Lorca, any amin'ny faritr'i Murcia, ao Espana, tamin'ny 11 May. Niteraka fahafatesan'olona sivy sy naharatrana manodidina ny 300 teo ho eo hatreto ireo horohorontany, nanana tanjaka 4.1 sy 5.1 [es] tamin'ny maridrefy Richter, miampy ireo rambony taty aoriana. Vaovao, fanehoan-kevitra sy fanohanana samihafa no niraraka...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Mey 2011
Afrika Mainty12 Mey 2011